अब त बाँचिन्छ कि ! Bizshala -
जब बन्दाबन्दीको घोषणा भयो। सबैभन्दा पहिले मेरो ध्यान खल्तीमा गयो। खल्तीमा एउटा पुरानो फोन सेटमात्र थियो। फोन सेटमा बैंकको मेसेज अलर्ट हेरेँ। त्यसमा लेखिएबमोजिम अब खल्तीमा पैसा आउनेवाला थिएन। खल्तीमा पैसा नआए भान्छामा कार्यक्रम बन्द हुनेवाला थियो। भान्छाको कार्यक्रम केही दिनसम्म हुने त पक्कापक्की नै थियो। भान्छाको कार्यक्रम सक्किएको दिन जिन्दगीको कार्यक्रम भने धरापमा पर्ने निश्चित नै थियो।
मुख्य कुरा त पिउने पानीको ढुवानी बन्द भयो भने के पो गर्ने होला। यो मूल चिन्ताको विषय थियो। तर पानी नियमित वितरण हुन थाल्यो। मैले पानी किन्नका लागि पैसाको खोजी गरेँ।
सिरानीमुनि एउटा नोट रहेछ, एक जार पानीबराबरको। पानी एक जार ल्याएँ। चामल पनि सक्किनै लागेको थियो। तर अलिकति मकैको पिठो बाँकी थियो, आमाले पठाइदिनुभएको। मेरो प्राण, मेरी आमा र मकैको पीठो।
पैसा सकियो। पानी पनि सकियो।
काकाकुल जिन्दगी बाँच्न सकिन्न। इनारको पानी पिउने विचार गरेँ। मज्जाले उमाल्ने अनि पिउने। बिजुलीबाट चल्ने भाँडा जोहो गरेको थिएँ, पानी उमाल्न।
एउटा जुक्तिले भन्यो, यैबेला हो, खुत्रुके फोर्ने। माटोको खुत्रुके हो। ५० रुपैयाँ तिरेर किनेको। यसलाई फटाउनु भनेको ५० को नोट च्यातचुत पार्नु पनि हो। त्यतिले त एक जार पानी पो आउँछ। यस्तो सोचेँ। फेरि खुत्रुकेमा जम्माजम्मी ५० पनि छ कि छैन। पैसा जम्मा गर्न थालेको धेरै दिन पनि भएको थिएन।
अर्को जुक्ति आयो। बुद्धि, विवेक र जुक्ति संकटमा नै आउँछ भन्थे। हो भन्ने बुझ्दैछु।
खुत्रुके पनि जोगाउने अनि पैसा पनि पाइने। खरेटोको सिन्को खुत्रुकेको सानो प्वालबाट भित्र छिराउने र नोट च्यापेर पैसा निकाल्ने। मोबाइल फोनको टर्च बालेर खुत्रुकेको पैसा खसाल्ने प्वालमा राख्ने र खुत्रुकेको मुखबाट भित्र हेर्ने। हेर्दा पैसा देखियो। ५ का, १० का, २० का, ५० का र १०० का नोटहरु देखिए।
मनखुस भएजस्तो भयो।
देब्रे हातले खुत्रुके उचालेँ। दाहिने हातको सहायताले पैसा खसाल्ने प्वालबाट सिन्का भित्र छिराएँ। सिन्काले पैसालाई स्पर्श गर्यो। तर पैसा तानिएन।
पटक–पटक प्रयास गरेँ। पैसा निकाल्न सकिएन। दुवै हात गले। म थाकेँ।
त्यति नै बेला झुन्डिराखेको ऐना हेरेँ। आफ्नो निधारबाट त पसिना पो बगिरहेको देखेँ।
दुवै हातले खुत्रुके उचालेर हल्लाएँ। भित्रबाट छन्द्रङछुन्द्रुङ आवाज आयो। सरर्र सुरर्र ध्वनि निस्कियो।
पैसा निकालेर पानी किन्ने योजना असफल होलाजस्तो भयो।
अब पानी उधारो माग्ने विचार गरेँ।
अर्को मनले भन्यो, ‘फेरि प्रयास गर भाइ।’
योपटक खुत्रुकेभित्र उज्यालो पार्ने प्रयास गर्दै पट्टयाएको नोटको बीच भागमा सिन्का पसाउन खोजेँ। अनि खुत्रुकेलाई उल्टो पारेर नोटलाई मुखनजिक ल्याउन अलि–अलि हल्लाएँ। सिन्काको चेपमा पैसा। सिन्कालाई खुत्रुकेसँग जोडले टाँसेर प्वालपट्टि तानेँ। नोटको अलिकति भाग बाहिर निस्कियो। नोटलाई दुई औँलाले समातेर विस्तारै तानेँ। नोट फुत्त निस्कियो। रु. ५।
प्रयास जारी राखेँ। निरन्तर।
५० को नोट निस्कियो एकपटक। आधा च्यातियो। झन्डै कामै नलाग्ने भएको।
अब एक जार पानी त आयो। थकान अलिकति मेटियो।
एकपटक त एक रुपैयाँको सिक्का फुत्त झर्यो। त्यसलाई फेरि भित्रै खसालिदिएँ।
अन्ततः सबै नोटहरु निकालेँ। जम्मा ४९५ रुपैयाँ जम्मा गरेको रहेछु।
अनि चार जार पानी किन्न पुग्ने रुपैयाँ स्टक राखेर बाँकी पैसाले चिउरा, आलु र साग अनि गोलभेँडा किनेँ। एक लिटर दूध पनि किन्न मन थियो। हिसाब गरेँ र किन्न सकिनँ।
एक सातामा रासन लगभग सकियो। अब के गर्ने ? अफिसियल खातामा अलिकति पैसा थियो। त्यो पनि बैंक बन्द भएर निकाल्न नमिल्ने भयो।
पर्सनल खातामा पैसा छैन। अनि एक मित्रलाई अनुरोध गरेँ। केही हजार रकम पठाउन मिल्नेछ भन्ने सन्देश आयो। तर पैसा आएन। त्यसपछिका दिनमा मित्रको खबर पनि आउन छाड्यो।
जे जसरी भए पनि पेटका लागि त आफैँले सोच्नुपर्यो।
अनि आफूलाई आवश्यक खाद्यान्नको सूची बनाएँ। आफ्नै भिजिटिङ कार्डको खाली भएको साइडमा लेखेँ। अनि कार्ड बोकेर गएँ होलसेल र खुद्रा दुवै कारोबार गर्ने छिमेकी दाजुको पसलमा। कार्ड दिएँ। सामान प्याक भयो। दाजुले उक्त कार्ड मेरो हातमा थमाए, जसमा जम्मा रकम लेखिएको थियो।
अनि भनेँ, ‘यो कार्ड हरायो भने ?’
उनले भने, ‘हराए पनि केही छैन।’
उनले खाता पनि बनाएनन्। निःसर्त सामान दिए। म अब त बाँचिने भइयो भनेर फर्कें। मनमनै दाजुलाई धन्यवाद दिइरहेँ।
सामानहरु निकालेर राखेँ अनि निक्कै बेर सामानलाई हेरिरहेँ।
मेरो पर्सनल खातामा ५ हजार जम्मा भयो। एक हितैषीले पठाइदिएका रहेछन्।
सोचेँ, ‘अब एक लिटर दूध पनि किन्छु। मिल्क टी पिउँछु।’ पानीपछिको मेरो प्रिय पेयपदार्थ नै त्यही न हो। ‘एक केजी स्याउ किन्छु। पसलको उधारो तिर्छु।’ यस्तै–यस्तै सोचेँ। अनि म भिजा कार्ड बोकेर एटीएम मेसिनको कोठामा छिरेँ। फटाफट पिन नम्बर दबाएँ। अझ सुरक्षित हुने प्रयास गर्दै दबाएको थिएँ। तर कारोबार रद्द भयो। मेसिनले पैसा दिन मानेन।
बाहिर निस्केर मोबाइलको मेसेज बक्समा हेर्छु त मेसेज आएको रहेछ। गलत पिन नम्बर डायल गरेका कारण कारोबार ब्लक गरिएको पो रहेछ।
अब के पो गर्ने होला ? शरीर एकाएक तातेर आयो।
तर पनि अब बाँच्नका लागि कुनै समस्या छैन क्यारे भन्दै बासस्थान फर्किएँ।
भोलिपल्ट फोनबाटै बैंकलाई अनुरोध गरेँ, पहिलेकै पिन नम्बर एक्टिभेट गरिदिन। बैंकको कार्ड सेन्टरले मेरो अनुरोधबमोजिम गरिदियो। धन्न बैंक धाउनुपरेन। पहिले प्रयोग गरिरहेको पिन नम्बर एउटा कागजमा टिपेर राखेको थिएँ। अब सम्झिनै परेन।
खल्तीमा पैसा आयो। पैसा निकालेर पसलको दाजुलाई तिरेँ। सोचेँ, उधारो खाता नबनाउनु भनेको ‘अलिक चाँडै तिर्नु’ भन्नुभएको होला। त्यसैले त्यो बाँकी रकम तिरेँ। ‘अर्कोपटक अप्ठेरो आइपरे मसँग छँदैछ नि भिजिटङ कार्ड’ मनमनै मुस्कुराएँ म।
अब ग्यास सकियो भने के गर्ने होला ?
यो प्रश्नबारे सोच्न नपरोस् भनेर आधा सिलिन्डर ग्यास खरिदका लागि पुग्ने रकम खुत्रुकेमा राखेको छु।